Banyere Anyị - Shenzhen Chance Technology Co., Ltd.
Shenzhen Chance Technology Co., Ltd. bụ ihe esenidụt ahịa akụkụ nke Matrix Crystal Technology (Shenzhen) Co., Ltd, guzobere na 2005, na onwunwe nke 13-afọ ahụmahụ na-emepụta na n'ichepụta obere LCD ngosi si 0.96" ka 13.3" , E-akwụkwọ, OLED ngosi. E nwere 6 mmepụta ahịrị na ihe niile zuru-akpaaka igwe, lapping-igwe, COG + FOG igwe, gluu dispensers, BL mgbakọ igwe, wdg 10 + ọrụ na àgwà otu na 200 ọrụ nọ ebe a na-emepụta ihe kasị mma ngwaahịa. N'oge kacha elu, 100K pcs LCD modul na-emecha site na ihe dị ka ndị ọrụ 400 ebe a kwa ụbọchị.
Iji nye ihuenyo dị elu, zute ihe ndị a chọrọ ahaziri, na-akwado ndị na-azụ ahịa ka ha nyochaa ahịa bụ ọrụ na ọrụ anyị mgbe niile. Ya mere, anyị na-etinye uche dị elu maka ịdị mma n'akụkụ ọ bụla. Anyị na-ahọrọ ndị na-ebubata ọkwa dị elu dị ka AUO, Innolux, CPT, LG na Hitachi. Anyị na-azụ ndị ọrụ ka ha kwalite mmepụta. Anyị na-azụ ndị na-ere ahịa ka ha na-ejere ndị ahịa ozi site na ịnụ ọkụ n'obi na ihe ọmụma ọkachamara.
Ohere bụ isi ihe na-eweta ụlọ ọrụ ama ama, BYD, TCL, DJN wee nweta nzaghachi dị mma n'aka ha. Inweta ntụkwasị obi nke ndị ahịa na-eme ka anyị nwee ntụkwasị obi na ebumnuche anyị ịkwado ndị ahịa nke ọma.
1. High-tech LCM na OLED ngosi mmetụta ma na-eri-oru nke ọma.
2. Ahụmịhe afọ 13 na imepụta na imepụta ihuenyo LCD.
3. Ngosipụta pụrụ iche wetara.
4. 6 ahịrị mmepụta. Ndị ọrụ 10+ na-arụ ọrụ nke ọma.
5. Nnukwu ahịa na Europe, America, na Asia.
6.Nzaghachi ngwa ngwa. Nkwado nka na ụzụ ọkachamara. Oge nnyefe dị mkpụmkpụ.
Ohere bụ naanị maka gị zuru oke!